साँङ्ला बेचेर करोडपति, मासुभन्दा महंगो साँङ्लाको अचार ! - TV Annapurna
साँङ्ला बेचेर करोडपति, मासुभन्दा महंगो साँङ्लाको अचार !
October 9, 2017 October 9, 2017 Annapurna TV
हाम्रो घरमा जताजतै साँङ्लो देखिने गर्दछ त्यही साङ्ला मार्नका लागी अनेकौँ विषदी प्रयोग प्राय सबैले गर्ने गरेका छौँ । तर हामी कसैलाई पनि थाहा छैन्, साँङ्ला मार्नुभन्दा पनि विक्रि गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भनेर ।
सुन्दा अचम्म लाग्ला तर उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनमा साङलाको बिक्रीबाट मानिसहरु करोडपति भएका छन् । अहिले चीनमा साङ्लाको व्यवसायिक खेती समेत हुन्छ ।
चिनियाँ किसान झुउ होइ व्यवसायिक रुपमा साङ्लोको खेती गर्ने पहिलो चिनियाँ किसान मानिन्छन् । उनी सन् २०१३ देखि साङ्लाको खेतीमा संलग्न छन् । साङ्ला बिक्री गरेर उनले करोडौं कमाइसकेका छन् ।
अहिले उनले गरेको काम अन्य मानिसले पनि गर्न थालेका छन् । साङ्लोको खेती गर्दा धेरै मानिसहरुले उनलाई ‘पागल’ समेत भनेका थिए । तर त्यतिबेला उनलाई ‘पागल’ भन्नेहरु नै अहिले साङ्लोको व्यावसायिक खेतीमा लागेका छन् ।
विभिन्न प्रकारका औषधी उत्पादनमा साङ्लोको प्रयोग हुने गरेको छ । साथै मानिसहरुले साङ्लोबाट बन्ने परिकार पनि विशेष रुचीका साथ खाने गर्छन् । चीनमा साङ्लाको अचार मासुभन्दा पनि महङ्गो मूल्यमा बिक्री हुने गर्छ ।
यस्तै विशेष प्रकारको वाइन बनाउन पनि साङ्लोको प्रयोग हुने गरेको बताइन्छ ।
सरकारमा जान कमल थापालाई हतारो, राप्रपाले आकस्मिक बैठक बोलायो
भारतले पुल मर्मत नगर्दा करोडौं घाटाः ढुवानी लागत बढ्यो
March 10, 2018 TV-Annapurna 0
सकेसम्म त रक्सि नखाएकै बेस । रक्सि खाएपछि गरिने धेरै कामले तपाईको सम्बन्ध,जागिर तथा अन्य कुरा समेत भताभुंग...
राजनीति सत्तामा जाने सिढीँ भएको स्वयं नेताहरुले नै बेलाबेलामा बताउने गरेका छन् । लामो समय राजनीति...
March 08, 2018 Annapurna TV 0
फागुन २५ र २६ गते नेपाल बन्द भन्ने हल्ला सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भएको छ । विभिन्न...
March 07, 2018 TV-Annapurna 0
अमेजानका मालिक जेफ बने सबैभन्दा धनी, नेपालका विनोद चौधरी कति नम्बरमा ?
अमेजानका मालिक जेफ बेजोस सबैभन्दा धनी अर्बपति बनेका छन् । फोर्ब्स म्यागजिनका अनुसार बेजोसको सम्पत्ति ११२...
१. जेम्स ह्यारिसन नाम गरेका एक व्यक्तिलाई १३ वर्षको उमेरमा एउटा शल्यक्रिया गर्नुपर्दा १३ लिटर रगत...
तीन महिनामा ११ सय कर्मचारीको विदेश भ्रमण, ७८ करोड बढी खर्च
पछिल्लो समय नेपालमा सरकारी कर्मचारीहरु बिदेश भ्रमण दौडाहमा देखिएका छन् । तीन महिनाको अवधीमा मात्रै अध्ययन,...
फोरमलाई सरकारः नखाँउ त दिनभरीको आहार, खाँउ त कान्छा बाबुको अनुहार
बाम गठबन्धनको समर्थनमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष...